Ciidamadii Ugaandeeska ee Lagu Dilay Deegaanka Golweyn oo Maanta Laga Dejiyay Garoonka Magaalada Kampala (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Ciidamadii Ugaandeeska ee Lagu Dilay Deegaanka Golweyn oo Maanta Laga Dejiyay Garoonka Magaalada Kampala (SAWIRRO)
HMN:- Meydadka Ciidankii Ugandeeka ahaa ee maalintii Axada ahayd lagu laayay deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxaa maanta laga dejiyay Garoonka Entebbe ee caasimadda dalka Uganda.
Diyaaradan oo ahayd nooca xamuulka qaada ayaa maanta meydadkan ka qaaday Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, oo uu ku dhex yaalo taliska ugu weyn ee Ciidamada Amisom.
Ciidanka la laayay oo ka tirsanaa Militariga Uganda ee qaybta ka ah Amisom, ayaa waxaa lagu weeraray meel ku dhow Deegaanka Golweyn, kadib markii ay sahay ka qaadeen Deegaanka Danow ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ururka Al Shabaab, ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku laayeen ugu yaraan 39 askari, ayna gacanta ku hayaan meydadka askartaasi.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Amb. Francisco Madeira oo ka hadlay weerarkani, ayaa beeniyay in dagaalkaasi lagu dilay 39 ka mid ah Ciidamada Amisom, balse sheegay in lagu dilay 12 askari, halka 7 kalana lagu dhaawacay.
Dowladda Mareykanka ayaa iyadana dhankeeda dhaleeceysay weerarka ka dhacay Gobolka Shabellaha Hoose, isla-markaana ay ka xun tahay waxyeelada soo gaaray ciidamada Amisom.